bliss - Synonyms of bliss | Antonyms of bliss | Definition of bliss | Example of bliss | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for bliss
Top 30 analogous words or synonyms for bliss
မြန်မာ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများအနေဖြင့် 'မြန်မာ'မင်္ဂလာခန်းမကြီးသုံးစွဲခွင့်၊ နောက်ခံစာတမ်းပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ အဝတ်လဲခန်း၊ မင်္ဂလာစင်မြင့် အခင်းအကျင်း၊ ကော်ဇောနီခင်း ထားသော မင်္ဂလာလျှောက်လမ်းမ၊ အခမ်းအနားမှူးအတွက် မိုက်ခရိုဖုန်း သုံးစွဲခွင့်၊ နောက်ခံတေးဂီတ၊ ဆလိုက်မီး၊ မင်္ဂလာကိတ်၊ ပန်းအလှ ဆင်ခြင်း၊ Bliss Package မှလွဲ၍ ကျန် Package သုံးခုအတွက် ရေခဲ ပန်းပုဖြင့် အလှဆင်ခြင်းနှင့် သတ် မှတ်ထားသော Package အမျိုး အစားများပေါ်လိုက်၍ နံနက်စာ ဘူဖေးအပါအဝင်တစ်ညတာတည်းခို ခွင့်များပါဝင်ကြသည်။
မြန်မာ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်း ထရိတ်ဒါးစ်ဟိုတယ်တွင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားအစီအစဉ် အတွက် Bliss ၊ Promises ၊ External ၊ Forever ဟူ၍ Wedding Package လေးမျိုးခွဲထား သည်။ Bliss Package အတွက် လူတစ်ဦးလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် ဧည့်သည်ဦးရေ အနည်းဆုံး ၅၅ဝ ဦးတက်ရောက်ရ မည်ဖြစ်ပြီး မုန့် ၃ မျိုး၊ ရေခဲမုန့်၊ ကော်ဖီနှင့် လက်ဖက်ရည်တို့ပါဝင် မည်ဖြစ်သည်။ Promises Package အတွက် လူတစ်ဦးလျှင် အမေ ရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် ဧည့်သည် ၄၅ဝ ဦး အနည်းဆုံးတက် ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး မုန့် ၄ မျိုး၊ ရေခဲမုန့်၊ ကော်ဖီနှင့် လက်ဖက်ရည် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ External Package အတွက် ဧည့်သည်ဦးရေ ၃၅ဝ အနည်းဆုံးဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ ဒသမ ၅ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် မုန့် ၅ မျိုး၊ ရေခဲမုန့်၊ ကော်ဖီနှင့် လက်ဖက် ရည်တို့ပါဝင်သည်။ Forever Package အတွက် လူတစ်ဦးလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၅ နှုန်းဖြင့် ဧည့်သည်ဦးရေ အနည်းဆုံး ၂၅ဝ ဦးဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မုန့် ၅ မျိုး၊ ရေခဲမုန့်၊ ကော်ဖီနှင့် လက်ဖက်ရည် ပါဝင်သည်။
ဝါနာဗွန်ဘရောင်း On December 9, 1948, the von Brauns' first daughter, Iris Careen, was born at Fort Bliss Army Hospital. The von Brauns had two more children, Margrit Cécile in 1952 and Peter Constantine in 1960. On April 15, 1955, von Braun becameanaturalized citizen of the United States.
ဝါနာဗွန်ဘရောင်း During his stay at Fort Bliss, von Braun mailedamarriage proposal to 18-year-old German heiress Maria Luise von Quistorp (born ), his cousin on his mother's side. On March 1, 1947, having received permission to go back to Germany and return with his bride, he married her inaLutheran church in Landshut, Germany. He and his bride, as well as his father and mother, returned to New York on March 26, 1947.
ဝါနာဗွန်ဘရောင်း Finally, von Braun and his remaining Peenemünde staff (see List of German rocket scientists in the United States) were transferred to their new home at Fort Bliss,alarge Army installation just north of El Paso. Von Braun would later write he found it hard to developa"genuine emotional attachment" to his new surroundings. His chief design engineer Walther Reidel became the subject ofaDecember 1946 article "German Scientist Says American Cooking Tasteless; Dislikes Rubberized Chicken,' exposing the presence of von Braun's team in the country and drawing criticism from Albert Einstein and John Dingell. Requests to improve their living conditions such as laying linoleum over their cracked wood flooring were rejected. Von Braun remarked that "...at Peenemünde we had been coddled, here you were counting pennies..." At the age of 26, von Braun had thousands of engineers who answered to him, but was now answering to "pimply" 26 year-old Major Jim Hamill who possessed an undergraduate degree in engineering. His loyal Germans still addressed him as Herr Professor, but Hamill addressed him as Wernher and never bothered to respond to von Braun's request for more materials, and every proposal for new rocket ideas was dismissed.